DZIVARESEKWA, HARARE —
Sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, rakurudzira vashandi kuti vasavhotere mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nebato ravo reZanu PF musarudzo dzegore rino richiti hurumende iripo pari zvino haisi kukoshesa kodzero dzevashandi munyika.
VaMutasa vashora hurumende yaVaMnangagwa vachiti hurumende yavo haisi kupa vashandi mari dzemihoro dzinoenderana nekushanda kwavanoita.
VaMutasa vatorawo mukana uyu kutaura nyaya dzezvematongerwo enyika vachiti ivo seZCTU vave kutoita zvematongerwo enyika nokuti nyaya dzevashandi dzinogadziriswa chete nenyaya dzezvematongerwo enyika.
Vati hurumende yaVaMnangagwa ihurumende yakapinda panyanga zvechisimba kana kuti coup izvo zvinopokanwa nazvo naVaMnangagwa nehurumende avo vanoti vakatevedzera bumbiro remitemo kuti vapinde mumasimba ehutongi.
VaMutasa vatora mukana uyu kutsoropodza mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaConstantino Chiwenga, nekudzinga basa kwavakaita vana mukoti vachiti ikodzero dzevashandi kuramwa mabasa kana vasiri kubhadharwa zvinovagutsa.
VaMutasa vakurudzira vashandi kuti vasavhotere Zanu PF musarudzo dzegore rino vachiti vanhu vakaita saVaChiwenga havakoshese zvido zvevashandi.
Vachitaurawo pamhemberero idzi, mutungamiri werimwe boka reMDC-T, VaNelson Chamisa, vati sebato rinoremekedza zvido zvevashandi, vachaita kuti pave nenhaurirano pakati hurumende, vashandi nevashandirwi pasi peTripartite Negotiating Forum kana vakasarudzwa musarudzo yemutungamiri wenyika kuitira kuti zvose zviri kunetsa vashandi zvigadziriswe.
Vakanangana nenyaya dzezvematongerwo enyika, VaChamisa vazivisa kuti vachashevedzera kuti veruzhinji varatidzire munyika yose vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzesarudzo nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission.
Vati vanoda kuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa.
VaMutasa vashora makambani ari kudhurisa zvinhu akafanana nekambani inobika chingwa yeLobels pamwe nemakambani enharembozha akaita seEconet, Telecel neNetone avanoti ari kudhurisa mari dzekufonesa pamwe nemabhanduru anoita kuti vanhu vakwanise kuenda padandemutande reInternet kana data.
Vati vachatorera matanho akaomarara makambani akadai vachiti vachakurudzira veruzhinji kuti vasatenge zvinotengeswa nemakambani aya kana akaramba achiita hunhu hwakadai.
VaMutasa vatiwo hurumende inofanirwa kushanda zvakasimba kuti ivandudze hupfumi hwenyika kuitira kuti hupenyu hurerukire vashandi pamwe neveruzhinji.
Vashorawo gurukota rinoona nezvevashandi, Amai Petronella Kagonye, nekusauya kwavaita kumhemberero dzanhasi.
Patabata Amai Kagonye panharembozha yavo vati vanga vasingwakwanise kutaura vachiti vakabatikana nesarudzo dzema primary dzanga dzichiitwa mubato ravo reZanu PF.
Kusavapo kwaAmai Kagonye kashorwawo naVaChamisa avo vati kana vapinda panyanga, mushandi wese wehurumende achange achisungirwa kuve pamhemberero dzekucherechedza zuva revashandi.
Studio7 haina kukwanisa kubata mutauriri waVaMnangagwa, VaGeorge Charamba kuti tinzwe pamire hurumende pamashoko aVaMutasa.